वर्णन मिडिया प्रियंकासँग फिल्ममा खेल्न सलमानले मानेन , बलिउड तरंगित अवस्थामा - वर्णन मिडिया
लिपुलेक विवादको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले जारी गर्याे विज्ञप्ति * अफ्रिकी मुलुकबाट उडेर आको यो सलह किरा । * शव लैजाँदा शवदाह गृहका कर्मचारीकाे भागाभाग * रौतहटमा क्वारेन्टाइन बनाउने बिषयमा झडप: प्रहरीद्वारा १२ राउन्ड हवाई फायर * रौतहटमा थप १७ जनामा कोरोना पुष्टि: रौतहटमा सङ्क्रमितकाे संख्या १२५ पुग्यो * लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालत जाने मौका: हद म्याद नलाग्ने * लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन समाचार माध्यमलाई पनि दिईने * रेलमार्गका लागि ६६ अर्ब:विमानस्थलका लागि १९ अर्ब * कर्मचारीलाई घुम्न प्रोत्साहन गरिने * आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (लाईभ हेर्नुहाेस) *
प्रियंकासँग फिल्ममा खेल्न सलमानले मानेन , बलिउड तरंगित अवस्थामा
२०-आश्विन-२०७६ | ०४:३०:२६ am
मुम्बई, बर्णन संवाददाता । भारतीय चलचित्र उद्योगमा नामले मात्र ब्राण्ड बनेका फिल्म अभिनेता सलमान खानका कारण अहिले बलिउड तरंगित अवस्थामा छ ।
प्राप्त पछिल्लो समाचार अनुसार, सलमान खानले चर्चित नायिका प्रियंका चोपडासँग चलिचत्र खेल्न अस्वीकार गरेका छन् ।
सामान्यतया अभिनेता सलमानलाई जति नरम स्वभावको मानिन्छ, त्यति नै खास अवस्थामा उनको कडा रिसको पनि चर्चा चल्ने गरेको छ। यदि कोहीसँग रिस उठे सलमानले त्यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
के भएको रहेछ त प्रियंकाको विषयमा ?
एक जमानामा कथानक चलचित्र भारतमा प्रियंकालाई अभिनेत्रीको रुपमा अनुबन्धित गरिएको थियो । तर अन्तिममा आएर प्रियंकाले चलचित्र छोडिन । यसबाट चलचित्र निर्माण नै संकट अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि सलमानले अर्का अभिनेत्री क्याटरिना केफलाई चलचित्रमा उनको स्थान दिए । तर उनले प्रियंकाको यही धोकालाई सलमानले बिर्सेका रहेनछन्।
प्रियंकाको यो कदमपछि उनले सार्वजनिकरुपमा केही नभनेपनि उनले अहिले निर्माण हुन लागेको चलचित्र राधेमा भने त्यति खेरको बदला सलमानले लिएको कुरा बलिउडमा सर्वत्र चर्चा चलिरेहेको छ ।
अहिले भने सलमान दबंग ३ का निर्माणका लागि व्यस्त छन ।अब आउने इदमा रिलिज हुने घोषणा गरिएको चलचित्र राधेको पनि तयारी चलेको छ । यो चलचित्र सफल कोरियन चलचित्र द आउटलाजको हिन्दी रिमेक हो । सलमान यसमा प्रहरी अधिकृत हुनेछन् ।
चलचित्र राधेका लागि सलमानको जोडी खोज्ने क्रममा प्रियंकाको नाम प्रस्ताव गर्ने क्रममा सलमानले यो कुरै नसुनी प्रस्ताव सिधै खारेज गरे पछि बलिउडमा यो चर्चा चुलिएको छ।
अब यस चलचित्रमा प्रियंकाको स्थानमा कसलाई ल्याइन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर यो अप्रत्यासित घटनाले प्रियंका र सलमानका बीचको दूरी अझै बढने अनुमान बलिउडमा गरिँदैछ ।
स्थितिझन भयावह हुदै: एकै दिन १ लाख ६ हजार मानिस कोरोनाबाट संक्रमित